Practicing in Administration | Myanmar Online School
For Admin, HR and SME Owners
Why we need to learn and study Office Administration?
If you want to know more Office Administration, Enroll now.
အနာဂတ်ကာလမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေအတွက် ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ၊ လက်ရှိ အလုပ်အကိုင် တည်မြဲ ခိုင်မာရေးတွေဟာ ပိုမိုပြင်းထန် ခက်ခဲလာတော့မယ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ပညာရပ်တွေကို တစ်ခုကောင်း specialized ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်ထားတာအပြင် ဆက်စပ်ပညာရပ်တွေကိုပါ လေ့လာသင်ယူမှုတွေ လုပ်ဆောင် ဖြည့်ဆည်းထားဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။
Admin လုပ်ငန်းတွေဟာ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း/ လုပ်ငန်းမဆို လိုအပ်သည်ချည်းသာဆိုတာ သိကြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ ပညာရပ်ကို လေ့လာသင်ယူထားလို့ အရှုံးမရှိဘူး ဆိုတာကိုတော့ လက်ခံကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီလို အသုံးကျတန်ဖိုးရှိတဲ့ Admin ပညာကို Anywhere - Anytime နေရာ အချိန်မရွေး သင်ယူနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးက မိတ်ဆွေတို့ ရှေ့ကို ရောက်ရှိလာပါပြီ။
#Practicing_in_Administration အတွက် Admission fee က မြန်မာငွေ ၃၀၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။
Early Bird ၂၀ ဦးကတော့ ၂သောင်းကျပ်နဲ့ တက်ရောက်ခွင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာအားလုံး သင်ယူပြီးစီးသွားတဲ့နောက်မှာ Certificate of Completion ကို E-certificate ဖြင့် ပေးအပ်သွားမှာပါ။
(သင်တန်းကာအတွင်း သင်ကြားပို့ချမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တစုံတရာ စိတ်ကျေနပ်မှု မရှိပါက သင်တန်းကြေး အားလုံးကို (အပြည့်အဝ) ပြန်လည် ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်)
ဒီသင်တန်းကို လေ့လာဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့------
ဖော်ပြပါ Bank Account တွေကနေ သင်တန်းကြေး ပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်။
#AYA- 022 120 101 012 018 4: ZAYAR MINN OO
#KBZ- 221 301 221 001 972 01: AMY KHINE
#WavePay Account- Ph.No. 09423708907: ZAYAR MINN OO
Description မှာ PIA Online လို့ ဖော်ပြပေးစေလိုပါတယ်။
(အခြား Payment platform များ အသုံးမပြုတဲ့အတွက် ဒီ account တွေကပဲ registration fee ပေးသွင်းပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်)
သင်တန်းကြေး ပေးသွင်းပြီးပါက screenshot or photo ကို Viber Phone No. 09 423 708 907 သို့ပေးပို့ပေးကြစေလိုပါတယ်။
(သို့မဟုတ်) https://www.facebook.com/ahkharasolution/ Facebook Page ရဲ့ Chat box မှာလည်း ပေးပို့ထားနိုင်ပါတယ်။
အက္ခရာ @ AHKHARA SOLUTION
What is Administration (7:51)
Invitation to join Facebook Group
Incoming Mail Handling (7:52)
Outgoing Mail Handling (5:34)
Stock Control (8:28)
Fixed Assets Control - I (4:21)
Fixed Assets Control - II (4:26)
Fixed Assets Control - III (6:08)
Vehicle Control and Fleet Arrangement
Vehicle Control (5:53)
Fleet Arrangement (4:39)
Repair and Maintenance (4:18)
General Administration and External Relations (8:45)
Travel Arrangement (13:42)
Meeting Management (9:52)
Uniform Control (4:57)
Assessment for Practicing in Administration
Webinar for Discussion 01 (57:22)
Hi, I’m Zayar Minn Oo.
I will share and teach you about Office Administration for Company and Organization.
အက္ခရာ @AHKHARA SOLUTION ရဲ့ တည်ထောင်သူနဲ့ Consultant တစ်ဦးဖြစ်ပြီး Admin, HR နှင့် Warehousing ပိုင်းဆိုင်ရာများကို Consultation ပြုလုပ်ပေးခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
Practicing in Administration
Everything you need to know about Office Administration